Qiimaha iyo ruqsadaha isbedelka ee NewsCityCAD 2014 - Geofumadas
Abriil, 2013 AutoCAD-AutoDesk, tabo cusub
Durba waxa soo bandhigay version 2014 ee AutoCAD, horumarka la taaban karo. Sida waa caado, todobaadka soo socda aan dib u eegi doona saameynta isbedelka this. Si kastaba ha ahaatee, ka hor inta aan diiradda saaraan qeybo ka mid ah in ka hormarey furitaanka of this version, kaas oo asal ahaan waa design shirkadaha cusub iyo model ku saleysan takhasus liisan a Suites. Ugu dambeyntii waxaan ku dari karnaa liis qiimo ah sida kuugu jirta dukaankaaga internetka; caddaynayaan inaysan ku jirin VAT.
Waxa uu leeyahay in uu araggiisa shirkadaha forums user cusboonaysiinta in uu leeyahay AutoDesk, kaas oo ka yimaadaa la midab qabow madow dhaqanka in uu ka adkaaday sanadihii la soo dhaafay ku hadlaan. Tartiib tartiib isbeddel ayaa la hirgeliyey ku dhufto ee kala duwan ee adeegyada iyo wax soo saarka, kuwaas oo kadis ah ay timid waqti in daalacanaya ka qalab mobile ahayd loo dulqaadan karin. Uu hab waa cad yahay, design hal abuur in yimaado og waxyaabaha Misbaax ku meel ka baxsan kaabayaasha dhaqdhaqaaq doonaa filimada iyo ciyaaraha elektaroonigga ah.
AutoDesk waxay qabatay aruurinta codsiyada ee loo yaqaan 'Suits', sidaa darteed isticmaalayaasha waxay yeelan karaan barnaamijyo kala duwan oo ku saleysan jihada mawduuca.
Ilaa hadda, codsiyada waaweyn waxay ahaayeen:
Soo Celinta alaabta
Inkastoo guud ahaan, ay ku dhawaad ​​100 barnaamijyada kala duwan, kaas oo lagu qaybsamaan soo socda Dacwadaha 7 scalable in lagu daydo Standard, Premium iyo Ultimate.
Waxaa la arki karaa in inta badan suurtagal ah in heerarka caadiga ah ay ka mid yihiin AutoCAD, Raster Design taas oo u ogolaanaysa inuu u rogo raajo ah Vektor (oo markii hore lagu magacaabo Overlay) oo hadda taagan meelo badan oo ReCap ah oo loogu talagalay maareynta la fududeeyay ee daruuraha dariiqa. Heerka Heerka Sare, 3ds Max Design ayaa inta badan lagu daraa, ugu dambeynna waxay ku xiran tahay takhasuska laakiin guud ahaan NavisWork oo u hoggaansamaya ururinta iskaashiga ah ee walxaha ku yaal goobaha nooca saddex-dhinac ah.
Guud ahaan waxa ay u muuqataa model xiiso leh, inkastoo aan la soconaa in kala firidhsan of alaabta in ay leeyihiin AutoDesk ayaa this, taas oo ka dhigeysa noocyada ku dhaqanka combos leeyihiin alaabooyinka nuqul qaababka badan qasbo. Sababtuna waxay tahay, in markii ay badeecooyinka iyo clienteles jira iibsaday, ma ahan mid fudud si ay u adkeeyaan alaabta iyo ayaa loo baahan yahay in la joogteeyo nolosha -waxa aan qiyaaso waa inay noqdaan kuwo adag-.
Suite Versions Qiimaha (iyada oo aan lahayn VAT)
Tan waxaa u janjeedha samaynta, injineero iyo injineerada in la qorsheeyo, raster diinta ka data si dulinka, dajinta naqshadda dhismayaasha iyo 3D animation.
Waxaa ku jira mid Nidaamka caadiga ah barnaamijyada:
La Nidaamka Premium inlcluye 3ds Max Design si ay u abuuraan filimado filimada iyo jilayaasha sare.
iyo Nooca ugu dambeeya Naqshadeynta Qalabka si ay u shaqeeyaan qaabab badan oo adag.
Dhismaha Design Suite
Su'aalahaan waxaa loogu talagalay dhismayaasha, injineeriyeyaasha elektromeknikada (MEP), injineernimada dhismayaasha iyo qandaraaslayaasha dhismayaasha ee ubaahan shaqooyinka hoos yimaada qaabaynta BIM.
La Nidaamka caadiga ah soo qaado barnaamijyada:
-AutoCAD Faahfaahin Dhisme
La Nidaamka Premium 3 waxay ku dareysaa codsiyo badan: 3ds Max Design, NavisWork Simulate iyo Revit
Iyo Nooca ugu dambeeya waxaa ka mid ah 4 oo lagu daray: NavisWork Maamul, Inventor, Robot Structure iyo InfraWorks
Barnaamijka Kaabayaasha Casriga ah
Nashqadeeyayaasha madaniga ah, naqshadeeyayaasha adeegyada dadweynaha, xirfadlayaasha GIS
La heerka caadiga ah soo qaado barnaamijyada:
La Nidaamka Premium 8 waxay ku dareysaa barnaamijyo badan: 3ds Max Design, Qaab-dhismeedka Dib-u-Celinta, Dakhliga Musqusha, 3D Mashruuca, InfraWorks iyo Bridge, Qaabka Korontada iyo Module-yada.
La Nooca ugu dambeeya Sum 4 Codsiyo badan: NavisWorks Maamul, Robot Structural, Revit iyo Roads / Highways iyo River / Modules Flood.
Design Design Suite
Tani waa loogu talagalay naqshadaha dhirta wax soo saarka
-Dhacdinta aasaasiga ah
La Nidaamka Premium 3 waxay ku dareysaa barnaamijyo badan: 3ds Max Design, iyo NavisWork Simulate.
La Nooca ugu dambeeya 2 Codsiyo dheeraad ah: Shahaadada Xirfadlaha iyo NavisWorks Maamul.
Naqshadeynta naqshadeeyayaasha dhirta warshadaha, injineerada dhirta wax soo saarka kuwaas oo xakamaynaya naqshad la'aanta oo kaliya laakiin hawlgalka.
La Nidaamka Premium 5 waxay ku dareysaa barnaamijyo badan: 3ds Max Goobta 3D, Qaabdhismeedka, Faahfaahinta Qaabdhismeedka iyo NavisWork Simulate.
La Nooca ugu dambeeya 2 waxay ku darsataa codsiyo badan: Inventor Professional iyo Inventor oo ay ku jiraan Nidaamka Routed.
Suugaanta Design Product
Ujeedooyinka naqshadeeyayaasha, mishiinka farsamada, injineerada korontada ayaa diirada saara geedi socodka iyo wax soo saarka iyo horumarinta jawiyada.
La Nidaamka Premium 4 waxay ku dareysaa barnaamijyo badan: 3ds Max Inventor Professional, Electric iyo NavisWork Iskuday.
La Nooca ugu dambeeya waxay ku darsataa 2 codsiyo badan: Sameeyshaha Naqshadda iyo NavisWork Maamul.
Suugaanta Abaabulka Suugaanta
Tani waxay si gaar ah u tahay hindisayaasha, mishiinnayaasha iyo kuwa wax-qabadka sare leh ee muuqaalka ama kuwa horumarinta ciyaaraha.
Waa kuwan barnaamijyada:
Qeybaha Premium iyo Ultimate waa isku mid. Heerka Nidaamku kuma jiraan waxyaabo la wadaago.
Siciradu waxay u muuqdaan kuwo kala gooni u dhexeeya Entertaiment Suite oo ay ku jiraan 3ds Max iyo mid kale oo ay ku jiraan Maya.
kala duwanaansho xiiso leh AutoCAD 2014 waa in barnaamij kasta oo laga soo dajisan karo Trial, oo aan haysan in la diiwaangeliyo oo la taabto in siiyey dukaanka online fududeeyaa Mudanayaasha deg deg ah si waafaqsan nidaamka qalliinka afka, iyo haddii loo baahdo diraya xirmo kaliya by mail ama download.
Iyo sida qiimaha (oo aan lahayn VAT), codsiyada shakhsiga ah, tani waa liis; xusuusnow in qof kasta oo hore u lahayn hannaanka 2014:
Qalabka Infrastructure Autodesk 2013
Shirkadaha Autodesk ee 2014
Autodesk Publentor Publisher
Autodesk Navisworks Maamul 2014
Autodesk Architecture Revit 2013
Qorshaha Cusub ee Autodesk 2013
Autodesk Hirgelinta 2013
Shirkadda Autodesk T-Splines-plugin ee Rhino
Naqshadeynta isku xirka alaabta ee AutoDesk ayaa ah mid xasillan ka dib isbeddellada ka dhexeeya nooca 2009; sidaas darteed isbeddelada kor ku xusan ee sawirka ma saameyn ku yeelanayaan muuqaalka muuqaalka laga bilaabo codka madow-madow ee ka yimid AutoCAD 2009. Marka la eego isfahamka faylalka casriga ee foomka Suuliyada, waqtiga ayaa sheegi doona isbeddellada lagama maarmaanka ah. Xaqiiqdii 2015 version waxaa ku jiri doona dib u hagaajin ku salaysan badeecadaha isticmaala isticmaalaya gudaha Standard Standard.
Post Previous«Previous Bentley ProjectWise, waxa ugu horeeya ee aad u baahan tahay in la ogaado
Post Next Shirkadda Sirdoonka ee Shirka Brazil, ayaa la dalbadaaNext »